May | 2009 | Zox Again
May 28, 2009 by zoxagain
ဒူဘိုင်းရဲ့ တခြားကုမ္မဏီတွေတော့ မပြောတတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္မဏီကတော့ ရောက်ရောက်ချင်း ကြိုတင်ငွေ (Advance) ကို မပေးသေးဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးသလို ကျွန်တော်တို့ဟိုတယ်ကလည်း အဲဒီအချိန်မဖွင့်သေးတာလဲ ပါမှာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ အိပ်လိုက်၊ စားလိုက်ပေါ့ဗျာ။ ရန်ကုန်ကနေတော့ ကျွန်တော်ဒေါ်လာ (၅၀) ပဲထည့်လာတယ်။ ရောက်ပြီးသုံး၊ လေးရက်လောက်ကြာတော့ နိုင်ငံခြားမှာ အရမ်းလိုအပ်တဲ့ ဖုန်းကဒ်တစ်ကဒ်ဝယ်တယ်ဗျာ။ ဟဖ်ရှုးတစ်ရံဝယ်တယ်ဗျာ။ တခြားအပိုဆိုလို့ ကျွန်တော်ဘာမှ မသုံးခဲ့ဘူးဗျ။ (ယူလာမိတာကလည်း ၅၀ ပဲကိုး) အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ဘယ်နိုင်ငံကနေပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကို ဖုန်းဆက်ရင် ဈေးအင်မတန်ကြီးတော့ ဖုန်းတောင်ကျွန်တော်ရောက်ပြီး ၃ ရက်လောက်နေမှ (၁) ခေါက်ပဲ ဆက်ဖြစ်တယ်။ မိန်းမကိုလည်း အရမ်းလွမ်းတာကိုးဗျာ။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော့်မှာ ကျန်နေတဲ့ငွေစလေးတွေကို ကျွန်တော်တစ်နေရာမှာပဲ သုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။ (ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်အဓိက ပြောချင်တဲ့အကြောင်းက အခုမှစမှာပါ) ညနေပိုင်း ကျွန်တော်အိမ်မပြန်ခင် cyber cafe ကိုသွားပြီး ကျွန်တော့်မိန်းမနဲ့ ချက်တင်ထိုင်တာပါ။ တစ်နာရီကို ယူအေအီးပိုက်ဆံ ၃ ဒရ်ဟမ် ပါ။ ၁ ယူအက်စ်ကို ယူအေအီးငွေ 3.65 ပေါက်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းလိုလို ကျွန်တော်တို့ ၂ ကြိမ်စီထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ကလည်း မဆင်းဖြစ်သေးတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အလုပ်မှာ Training လည်းစရော ကျွန်တော်လည်း နဂိုလိုထွက်လို့မရတော့ဘူး။ အမြဲတမ်းမိန်းမနဲ့ ပြောနေကျအချိန်ဆို ရင်ထဲမှာပူသလို လောင်သလိုလိုပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် တစ်ရက်မှာတစ်ကြိမ်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖြစ်ကြပါတယ်။ မကြာပါဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အိတ်ဆောင်ပိုက်ဆံလေးတွေ ကုန်ပါရော။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလည်း မသိဘူးပေါ့ဗျာ။ ကံကောင်းချင်တော့ ကျွန်တော်သယ်လာခဲ့တဲ့ ပုဇွန်ခြောက်ထုပ်ကို လိုချင်တဲ့သူတစ်ယောက် ပေါ်လာပါတယ်။ သူကလဲ ရောင်းခိုင်းတာပါ။ ကျွန်တော်လည်း ငွေလိုနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ၇၀ နဲ့ရောင်းလိုက်ပါတယ်။ သူက ၁၀၀ ပေးသွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်ချက်တင်ကို အရင်ထက်ပိုကြာကြာ သုံးနိုင်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမကလည်း ရန်ကုန်အချိန် ၁၀ နာရီ၊ ၁၁ နာရီ အထိထိုင်ပေးပြီး ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောကြပါတယ်။ ပုဇွန်ခြောက်ရောင်းလို့ရတဲ့ ငွေထဲက ၁ ဒရ်ဟမ်ကိုပဲ ဆပ်ပြာမှုန့်ဗူးတစ်ခု ၀ယ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျန်နေတဲ့ပိုက်ဆံတွေကတော့ ကျွန်တော့်မိန်းမနဲ့ အင်တာနက်မှာ စကားပြောရင်းနဲ့ပဲ ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ပိုက်ဆံကုန်သွားပြီး ၁ ရက်၊ ၂ ရက်လောက်ကြာတော့ ကုမ္မဏီက ကြိုတင်ငွေထုတ်ပေးပါတယ်။ ယူအေအီးပိုက်ဆံ ၂၀၀ ပါ။ ရလာတဲ့အဲဒီပိုက်ဆံလေးကို ကျစ်ထားပြီး ကျွန်တော် Breakfast တောင် အပြင်မှာဝယ်မစားခဲ့ပါဘူး။ ဟိုတယ်က နေ့လည်စာ၊ ညစာကျွေးပါတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောမယ်ဗျာ။ တခါတလေညစာကျွေးချိန်အမှီ မရောက်သွားလို့ ညစာပျောက်သွားတာတောင် အပြင်မှာကျွန်တော်ဝယ်မစားခဲ့ပါဘူး။ အင်တာနက်သုံးဖို့၊ ကျွန်တော့်ဇနီးလေးနဲ့တွေ့ဖို့နေရာမှာ သုံးရမယ့်ပိုက်ဆံလေး ပဲ့သွားမျာစိုးလို့ပါ။
ဟုတ်ကဲ့…. တချိန်က ကျွန်တော့်ချစ်သူ၊ အခုကျွန်တော့်ရဲ့ဇနီး၊ သူ့ကို ကျွန်တော်အရမ်းချစ်ပါတယ်။
May 24, 2009 by zoxagain
ငါမျှော်လင့်နေတဲ့ နင့်ကိုငါ့အနားမှာ မြင်လိုက်ရတော့
ငါတို့ ရည်မှန်းချက်တွေ အထမြောက်ပြီဆိုပြီးတော့ပေါ့။
ငါ့ရင်ဘတ်ကို အရှင်လတ်လတ်ခွဲခံလိုက်ရသလိုပဲ ကောင်မလေးရယ်။
ဒီတစ်ခါကျတဲ့ မျက်ရည်တွေက အမြဲတမ်းထက် ပိုပူလောင်နေတယ်။
နင်ပြောထားခဲ့တဲ့ နင့်ရဲ့ Voice Mail လေးပါ။
ဒီနေ့ထက်ထိ အဲဒီ Voice Mail လေးကို ငါဖွင့်နားမထောင်မိသေးဘူး။
အခုတော့ နင်ငါ့ကိုအိပ်မက်ထဲမှာ ဖွင့်ပြလိုက်တယ်နော်။
အခု ငါ့ငိုသံတွေနဲ့အတူ ရှိုက်သံတွေကိုပါ ငါပြန်ကြားနေရတယ်။
အခု အရာအားလုံးထက် နင့်ကိုပဲငါလိုချင်တယ်။ နင့်ဆီကိုပဲ ငါပြေးလာချင်တယ်။
ဘယ်လိုပဲ လူတွေကပြောကြပါစေ… နင့်အနားမှာပဲ နင့်လက်ကလေးကိုကိုင်ပြီး
အခုတော့နင့်ကိုခွဲပြီး ဒီနိုင်ငံခြားဆိုတာကြီးကိုပဲ ရောက်ခဲ့ရတယ်။
နင့်ကိုပဲ အချိန်တိုင်း ငါမျှော်လင့်နေတယ်။
ငါတို့ရဲ့ဘ၀တွေ အမြန်ဆုံး ပြည့်စုံမှုရရှိပါစေ။
နင့်ရဲ့ဆုတောင်းတွေကို ငါ့ရဲ့ဆုတောင်းတွေထက် လက်ခံတော်မူပါစေ။
May 22, 2009 by zoxagain
နင်နဲ့ ပြန်ဆုံဖိုအတွက် ငါအသက်ဆက်ရှင်ရဦးမယ်။
နင့်မျက်နှာလေးကို ပြန်မြင်ရဖို့အတွက် ဒီမျက်လုံးတွေနဲ့ငါ ငိုနေရဦးမယ်။
နင့်ကိုနောက်ထပ်ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ ပြောဖို့အတွက် ဒီနှုတ်ခမ်းနဲ့ နင့်ကိုတသနေရဦးမယ်။
နင်နဲ့ ငါ့ဘ၀တစ်ခုလုံးအတွက် ငါအသက်ဆက်ရှုနေရဦးမယ်။
အခုရှိနေတဲ့ အလွမ်းတွေထက်စာရင် အရင်ကအဆင်မပြေမှုတွေကတောင် ငါခံနိုင်ရည်ရှိပါသေးတယ်။
နင့်လက်ကလေးကို ဒီအချိန်ဝေးနေရတာထက်စာရင် အရင်က ဖုန်ပေနေတဲ့ လက်နဲ့တွဲထားရတာကို
အခုအချိန်အိပ်မရတာတွေထက်စာရင် အရင်က အိပ်ရေးပျက်တာတွေကတောင် ငါ့အတွက်အဆင်ပြေပါသေးတယ်
နင့်ဆုတောင်းတွေကို ငါမျှော်လင့်နေတယ်။ နင့်အားပေးစကားတွေကို ငါကြားယောင်နေတယ်။ ငါတို့အနာဂတ်ကို
ကောင်မလေးရေ… နင့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္တာကိုပြန်လည်ထွေးပွေ့နိုင်ဖို့အတွက် ဒီလက်တွေနဲ့ပဲ ငါကီးဘုတ်ကို ရိုက်နေရဦးမယ်။
May 19, 2009 by zoxagain
May 18, 2009 by zoxagain
အမြဲတမ်းပြောနေကျ စကားတစ်ခွန်းကိုပဲ ငါထပ်ပြောမယ်။ အရမ်းသတိရတယ်ဟာ။ နင်နဲ့ငါနားထောင်နေကျ သီချင်းတွေကို နင့်ကိုငါသတိရတဲ့အချိန်တိုင်း နားထောင်မိတယ်။ အဲဒီသီချင်းလေးတွေကို နားထောင်ရင်း ငါတို့ ၂ ယောက်နီးခဲ့ရသလို၊ အဲဒီသီချင်းလေးတွေကို နားထောင်ရင်းနဲ့ပဲ နင်နဲ့ငါခွဲခဲ့ကြရတယ်နော်။ ငါဘယ်လိုနေရမလဲ။ နင့်ရဲ့ငိုသံတွေကို ငါဘယ်လိုနားထောင်ရမလဲ။ နင်ပြောခဲ့သလို နောင်တချိန်ငါတို့ အမြဲတူတူနေရဖို့ အခုခဏဝေးနေရတာပဲ ဖြစ်ပါစေဟာ။
နင်ပို့ပေးလိုက်တဲ့ အိတ်ဆောင်အဘိဓါန်လေးကို အခုလည်းငါဖတ်နေတုန်းပဲ။ အဲဒီအဘိဓါန်စာအုပ်လေးရဲ့ Alpahbets တွေနဲ့အတူတူ နင့်ရဲ့စိတ်ကူးလှလှလေးနဲ့ ရေးပေးခဲ့တဲ့ နင့်ရဲ့စာရွက်အပိုင်းလေးတွေကို အခုလည်းငါဖတ်နေတုန်းပဲ . . .
A – အလိုတော်နဲ့ (ဘုရားသခင်) အလိုတော်နဲ့ နီးစပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ မင်းခက်နဲ့ Paraween ကိုအမြန်ဆုံး နီးကပ်ခွင့်ပေးပါစေ။ အလိုတော်နဲ့ မင်းခက်အစစအရာအရာ အဆင်ပြေပါစေ။ Paraween ကိုလည်း အရင်ကထက် ပိုပြီးချစ်နိုင်ပါစေ။
B – ဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲ။ Paraween အကြောင်းရော ပါရဲ့လား။ မင်းခက် ဘာတွေပဲလုပ်နေလုပ်နေ၊ ဘယ်သူနဲ့ပဲရှိနေရှိနေ Paraween ကိုတော့ သတိရပေးပါနော်။
C – စွန်းစားပြီးမောင့်အချစ်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့ Paraween ကိုတသက်လုံး ချစ်နေပါနော်။
D – ဒီလိုသာအကြာကြီး ခွဲပြီးနေရရင် Paraween သေသွားလိမ့်မယ်သိလား။ Paraween ကိုမင်းခက်အနား အမြန်ခေါ်ပါနော်။
E – အရာရာမင်းရဲ့သဘောပါ သွားချင်ရာသွား တားခွင့်မရှိသူပါ။ (ဒါက သီချင်းနော်)၊ ဘယ်ပဲသွားသွား Paraween ကိုပြောပြရမယ်နော်။ ကြားလား။ Paraween မှာတားခွင့်အပြည့်အ၀ရှိတယ်။ မင်းခက်မိန်းမအကြောင်း မင်းခက်သိတယ်နော်။
F – Family တစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက် ကြိုးစားကြရအောင်နော်။ မင်းခက်ရေ… အားတင်းထားပါ။ နောက်ဆို ပြည့်စုံတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြမယ်နော်။
G – G ဆိုတော့ (ဂငယ်) ပေါ့။ ဘာရေးရမှန်းလည်း မသိတော့ဘူး။ အင်း။ ဂါးဂါးငါးမုန့်စားချင်တယ်။ ၀ယ်ကျွေးနော်။
H – Hello … ဒါလင် မတွေ့ရတာကြာပြီနော်။ ဟိတ်- Paraween ကိုချစ်လား။ တစ်သက်လုံး ချစ်ရမယ်နော်။
I – အချိန်တိုင်း မင်းခက်ကိုလွမ်းနေတယ်ဆိုတာ မင်းခက်အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပေးထားပါနော်။ အချစ်ရယ်.. မင်းခက် Paraween အနားမှာမရှိပဲ Paraween တစ်စက္ကန့်လေးတောင် မပျော်နိုင်ဘူး။ (တကယ်)
J – J ဆိုတော့ (ဂငယ်) ပဲပေါ့။ လာပြန်ပြီ။ မရေးတတ်ပါဘူးဆိုမှ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ တွေ့မှပဲ ပြောပြမယ်နော်။
K – ကောင်းကင်ပေါ်က ကြယ်လေးတွေမရေတွက်နိုင်အောင် များပြားသလို Paraween ရင်ထဲက အချစ်တွေလဲ မင်းခက်မရေတွက်နိုင်ဘူး။ (ဟုတ်တယ်မလား)
L – Lovely လေး။ မင်းခက်ကို Paraween အရမ်းချစ်တာ မင်းခက်သိလား။
M – မင်းခက်ရေ။ ဘာလိုလိုနဲ့ Paraween တို့ရဲ့အချစ်ခရီးလမ်းလေး (၂) နှစ်ပြည့်တော့မယ်နော်။ မင်းခက်အပေါ် ဆိုးခဲ့တာတွေ အနိုင်ကျင့်ခဲ့တာတွေ ခွင့်လွှတ်ပေးပါနော်။ မင်းခက်ကို အရမ်းချစ်တယ်။
ကောင်မလေးရေ… ကျန်တာတွေကို နောက်နေ့မှဆက်ရေးပေးမယ်နော်။ ဒီမှာ အရမ်းမိုးချုပ်နေပြီ။ နင်အိပ်မက်လှလှမက်နေပါစေ။
May 16, 2009 by zoxagain
May 15, 2009 by zoxagain
နေကောင်းလား။ အခုဘာတွေလုပ်နေလဲ။ ငါ့ကို သတိရနေရဲ့လား။ ငါကတော့ နင့်ကိုအချိန်တိုင်း သတိရတယ်။ သိလား။ (ခဏခဏ) သတိရနေတာက တစ်နေ့လုံးပါပဲ။ ငါ့ရဲ့နေ့တစ်နေ့က နင့်ကိုသတိရတဲ့ အဲ့ဒီခဏများစွာနဲ့ပဲ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ် ကောင်မလေးရယ်။ နင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိရစရာတွေ ငါ့အတွက်အများကြီးရှိပေမယ့်လည်း နင်ကတော့ ငါ့အနားမှာရှိမနေသေးဘူးနော်။ ငါအရမ်းဝမ်းနည်းတယ်သိလား။ နင့်ကိုလည်း အရမ်းလွမ်းတယ်။ ငါယုံကြည်တယ်။ နင်ငါ့အနားမှာရှိရင် ငါပျော်နေလိမ့်မယ်။ မြန်မြန်လာပါတော့။ နင်မြန်မြန်လာပါတော့။ ငါ့နှလုံးသားက တောင်းဆိုနေပါတယ်။
(ကောင်မလေးရေ.. နင်မှတ်မိလား ဒီစာလေးကို။ သိချင်ရင် အောက်ကလိုင်းကို မောက်စ်နဲ့ ဒရဂ် ဆွဲပြီးကြည့်ကြည့်)
… မောင်တို့ချစ်သူဘ၀တုန်းက မောင့်မိန်းမရေးပေးခဲ့တဲ့ စာလေးတစ်စောင်လေ။ မောင်ပြန်ပြင်ရေးထားတာ။ …